La taliyaha dhanka Amniga Hogaamiyaha DG Puntland Gen. Khaliif Ciise Mudan ayaa ku geeriyooday dalka Turkiga oo loo geeyay howlo caafimaad sida ay Axadle u xaqiijiyeen mas’uuliyiin kala duwan.
Khaliif Ciise Mudan ayaa Puntland kasoo qabtay xilal kala duwan sida Wasiirka Amniga, haatan waxa uu ahaa la taliyaha Amniga Siciid Cabdullaahi Deni, sidoo kale waxa uu ka qaybgalay doorashada Dowlad Goboleedkaas ka dhacday Bishii Janaayo 2019-kii.
Waa Kuma AUN Gen. Khaliif Ciise Mudan?
Waxa uu ku dhashay Magaalada Boosaaso ee xarunta Gobolka Bari 1953-dii, Waxbarashadiisa Hoose waxa uu kusoo qaatay isla magaaladaas, Muqdisho ayuu usoo wareegay 1962-dii isaga oo ku qaatay Waxbarashadiisa Dugsiga Dhexe & sare.
1970-kii waxa uu kamid noqday saraakiil loo diray Dalka Ruushka si ay usoo qaataan tababaro loogu aqoon kordhinayo, waxa uu halkaas kusoo qaatay Tababar la xiriira qaybta duulliyenimada.
1974-tii ayuu dib ugu soo laabtay dalka oo markii hore laga diray, waxaana la siiyay darajada Xiddigle, labo sano kadib waxaa loo xiray Darajada Kabtan, 1976-dii ilaa 1979-kii waxaa uu helay Gaashaanle, waxa uu qayb ka noqday saraakiishii la guddoonsiiyay billadda geesinimada ee dagaalkii dhexmaray Soomaaliya & Itoobiya.
Waxa uu kordhiyay tababarka iyo dadaalka dhanka Ciidanka, 1979-kii ilaa 1983-dii waxaa loo dalacsiiyay Gaashaanle dhexe, halka sanadkii 1983-dii uu noqday Gaashaanle sare, sanad kahor burburkii dowladdii kacaanka waxaa loo xiray Sareeyo Guuto.
1986-dii ilaa 1990-kii waxa uu ahaa Taliyaha Xerada Ciidanka Cirka Soomaaliya ee Balli-doogle, muddo sanad ah oo ah 1990-1991-dii waxa uu noqday Taliyaha Ciidanka Cirka Soomaaliya waxa uu la xil dhameystay Dowladdii Militariga ee dalka maamuleysay 21-ka sano.
Dalalka uu aqoon kororsiga Ciidan kusoo qaatay waxaa kamid ah: Ruushka, Talyaaniga, Mareykanka, waxa uu ahaa Duulliye diyaaradaha militariga sida Miig 17, Miig 71, B21, Sukhoy 24 & Jusna.
Mas’uuliyiin kala duwan ayaa ka tacsiyeeyay geeridii ku timid Khaliif Ciise Mudan oo la qorsheynaya in lagu aaso Deegaannada maamulkaas sida ay Axadle u xaqiijiyeen xubno kala duwan.